Como Colocar Duas Fotos No Instagram Sheekooyinka Instagram, Mauricio Baldassarre
Sida loo dhigo laba sawir isla instagram sheekooyinka instagram
Qodobkaan waxaad ku baran doontaa sida loo dhigo laba sawir isla sheekooyinka instagram iphonehageheena oo dhameystiran.
Você está assistindo: Como colocar duas fotos no instagram
Ma jiro hal, habka ugu wanaagsan ee lagula wadaago sawirro lançar badan sheekadaadaInstagram. Waxaad si fudud ugu dhejin kartaa dhamaan sawirada sida shaqsiyaadka shaqsiyan sheekadaada ama waxaad abuuri kartaa isku duubni, hadii ay sifiican kuugu haboonaato qaabkaaga, inkasta oo ay tahay shaqo yar.
Way dhammaadeen maalmihii ay isticmaaleyaasha Instagram u baahnaayeen inay dib ugu noqdaan xulashada Khariidadda Sawirro dhowr jeer si ay u doortaan kaliya hal sawir oo ay u sooiyaan! Hadda caminho fududahay in sawirro badan lagu dhajiyo sheekooyinka Instagram.
Raac talaabooyinka hoose si aad wax ubaratosida loo dhigo laba sawir isla instagram sheekooyinka instagram.
Tallaabada 1. Kudar sawirro
Fur sheekooyinkaaga oo taabo astaanta laba geesoodka ee geeska bidix ee hoose si aad sawiro ugu darto.
Tallaabada 2. Dooro sawirro badan
Taabo badhanka "Xullo badan" geeska midig ee kore. Kadib dooro sawiradaada.
Tallaabada 3. Wax ka beddel
Tafatir sheekooyinkaaga sawirka adoo kudaraya qoraalka iyo sawirada.
Tallaabada 4. Daabac!
Markaad diyaar u tahay dhajinta, taabo “Sheekadaada”.
Habkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku dhejiso wax ka badan hal sawir sheekada instagram hal mar. Si kastaba ha noqotee, sawirrada aad nove xulatay xulashadan waxaa loo dhejin doonaa sida isku xigxiga qaar ka mid ah sheekooyinka isku xigxiga - dhammaantood ma ahan hal sheeko.
Kudar in kabadan hal sawir sheekadaada Instagram oo leh astaamaha "Nuqul + dhaji"
Tallaabada 1. Hair arjiga sawirka
Ku hair arjiga "Sawirrada" taleefankaaga. Xullo sawir aad rabto inaad kudarto sheekadaada.
Tallaabada 2. Nuqul sawirka
Guji xulashada sawirka oo taabo "nuqul sawir".
Tallaabada 3. Ku fur sheekooyinkaaga "Instagram" barnaamijka "Instagram"
Fur barnaamijkaaga "Instagram" oo aad u sameyso sheeko cusub.
Warqad dhejis ah oo leh "ku dar sheekada" ayaa soo muuqan doonta. Guji si aad ugu darto sawirka aad soo guurisay sheekadaada.
Haddii kale, dhagsii qalabka qoraalka oo nove dhaji gacanta.
Tallaabada 4. Ku celi tallaabooyinka kor ku xusan si aad ugu darto sawirro dheeri ah sheekadaada "Instagram".
Ver mais: Como Colocar Efeito Na Chamada De Vídeo Do Whatsapp, Google Meet 2021
Tallaabada 5. Taabo "Sheekadaada" si aad ugu dhejiso.